လေဟာနယ် Info. About. What's This?
ⓘ လေဟာနယ် ..
လေဟာနယ် သည် အရာဝတ္ထုကွက်လပ်၏ အာကာသ ကြားခံနယ်ဖြစ်သည်။ လက်တင်ဘာသာစကား vacuus မှ ဆင်းသက်လာပြီး လေဖိအားထက် နည်းပါးသော အငွေ့ဖိအားသက်ရောက်ရာ နယ်မြေကို လေဟာနယ်ဟု သတ်မှတ်သည်။ ရူပဗေဒပညာရှင်များက ပြီးပြည့်စုံသော လေဟာနယ်နှင့် တပိုင်းလေဟာနယ်ဟု သုံးနှုန်းကြသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် လေဟာနယ်တုများကို ဓာတ်ခွဲခန်းများတွင် ဖန်တီးလုပ်ယူနိုင်သောကြောင့်ပင် ဖြစ်သည်။ အင်ဂျင်နီယာပညာရပ်နှင့် အသုံးချရူပဗေဒဆိုင်ရာများ၌ လေဟာနယ်အား လေထုဖိအားထက် နည်းပါးသော မည်သည့် ကြားခံနယ်မြေကိုမဆို ရည်ညွန်းခေါ်ဆိုသည်။